ပျေါတူဂီအသငျး ယူရိုပါလိဂျဘုရငျအဖွဈ ပှဲခံဦးမယျ့ ခိုငျလုံတဲ့အကွောငျး ၅ ခကျြ – Sports A2Z
ပျေါတူဂီအသငျး ယူရိုပါလိဂျဘုရငျအဖွဈ ပှဲခံဦးမယျ့ ခိုငျလုံတဲ့အကွောငျး ၅ ခကျြ
လာမယျ့ ယူရို ၂၀၂၀ အစားထိုး ၂၀၂၁ ပွိုငျပှဲမှာ ပျေါတူဂီအသငျးအနနေဲ့ ပွငျသဈ၊ ဂြာမနီ၊ ဟနျဂရေီ မရဏအုပျစုထဲကို ကရြောကျနတောက ခရီးကွမျးဖွဈလာဖှယျ ရှိနတေယျ။ ရှုံးထှကျအဆငျ့ ၁၆ သငျးအဆငျ့ကို တကျရောကျဖို့ အုပျစုကနေ ၂ သငျးသာ ကြှတျမယျ့အနအေထားဖွဈပါတယျ။
ပျေါတူဂီ၊ ပွငျသဈ၊ ဂြာမနီဆိုတဲ့ ယူရိုခနျြပီယံဖွဈဖို့ ရပေနျးအစားဆုံးနဲ့ လကျရှိဥရောပရဲ့ အကောငျးဆုံးလကျရှေးစငျအသငျး ၃ သငျးထဲက အနညျးဆုံး တဈသငျးကတော့ အုပျစု ​F ကနေ အိမျပွနျရမှာကတော့ ဝမျးနညျးဖှယျရာဖွဈလာနတောပါ။
ဒီအခြိနျမှာ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုဦးဆောငျလာတဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးကိုကွညျ့ရငျ ဘယျအသငျးမှ လိုကျမမီတဲ့ အတောငျ့တငျးဆုံးလူစာရငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကို တှရေ့ခြိနျတာက လကျရှိခနျြပီယံ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ဘာကွောငျ့ ယူရိုပါလိဂျဘုရငျအဖွဈ ထပျမံပှဲခံဦးမလဲဆိုတာကို ဆှေးနှေးမှုတှမွေငျ့တကျလာစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ….
၁။ လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈအတှငျး အလှမျးမိုးနိုငျဆုံးအသငျး
၂၀၁၆ ခုနှဈက ခရိုအေးရှား၊ ဝေးလျဈနဲ့ ပွငျသဈတို့ကို ကြျောဖွတျပွီး ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပထမဆုံးနိုငျငံတကာအောငျမွငျမှု သီးပှငျခဲ့တဲ့ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျဖို့ ရောကျရှိလာတာဖွဈသလို ၂၀၁၈-၁၉ ရဲ့ UEFA နရှေငျးလိဂျမှာလညျး ပထမဆုံးခနျြပီယံအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီးနောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားကဆြုံးမှုကို ပွနျဦးမော့ဖို့ မောငျးတငျလာမှာပါ။
၂။ ပွိုငျဘကျတိုငျး ဖွုံရလောကျတဲ့ သာလှနျအငျအား
သိပျကို ပွီးပွညျစုံပွီး ဟနျခကျြညီတဲ့ လူစာရငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတာက ရျောနယျလျဒိုပရိသတျတှရေော ပျေါတူဂီပရိသတျတှအေတှကျပါ သူ့ရဲ့ပွိုငျဘကျ မကျဆီကို အလဲထိုးနိုငျမယျ့ ခကျြကောငျးအဖွဈ ခံယူထားကွတာကို တှရေ့သလို ညီညှတျလှနျးတဲ့ လူစာရငျးက ယူရိုခနျြပီယံဖွဈဖို့ လုံလောကျတာထကျကို ပိုနတေဲ့နောကျမှာ ကှငျးထဲက ခွစှေမျးကသာ သကျသဖွေဈလာဖို့ လိုအပျတော့တယျ။
၃။ လူငယျနဲ့ သမ်ဘာ အခြိုးကပြေါငျးစပျထားတဲ့ ခံစဈပိုငျး
ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံ မနျစီးတီးရဲ့ ရူဘငျ ဒီယကျဈနဲ့ သမ်ဘာ့ရငျ့ ဖှနျတေ၊ ပီပီတို့ရဲ့ ပေါငျးစပျမှုက ဗဟိုခံစဈပိုငျးကို စှဲမကျစရာဖွဈစသေလို ဘယျသူမှ ဂိုးမဝငျနိုငျတော့မယျ့ ဂိုးပေါကျကို ကာကှယျဖို့လားလို့ အမှမျးတငျခံထားရခြိနျမှာ ညာနောကျခံလူမှာ ကနျဆယျလို၊ ဘယျနောကျခံလူနရောမှာ ဂှာရဲရိုးနဲ့ နူနို မနျဒကျဈတို့ရဲ့အားက ကွောကျစရာသိပျကောငျးတဲ့ အတှဲအဖကျဖွဈနတေယျ။
၄။ ဆရာကလြှနျးတဲ့ ကှငျးလယျ
ရှေ့၊ လယျ၊ နောကျ ဟနျခကျြညီလှနျးနတေယျလို့ ခြီးကြူးမှုနောကျမှာ ကှငျးလယျတိုကျစဈပိုငျးက ဘရူနိူ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလျဗားတို့က အမွငျ့ဆုံးဖနျတီးမှုအပိုငျးကို တာဝနျယူသှားဖို့ ရှိနပွေီး ကှငျးလယျအထိုငျမှာ ပါရဲရား၊ မျောတငျဟိုတို့အပွငျ စပို့တငျးလစ်စဘှနျးရဲ့ ကှငျးလယျခံစဈသမား ပယျလငျညာလညျး ရှိနသေလို ရီနာတို ဆနျးခကျြဇျ၊ ဝီလီယံ ကာဗယျလျဟို၊ ရူဘငျ နီဗတျဈကို ပျေါတိုရဲ့ လကျရှိအကောငျးဆုံးကှငျးလယျလူဆာဂြီယို အိုလီဗီယေးရာက ထပျပေါငျးစပျလာဦးမှာက ကှငျးလယျအားကို တောငျ့တာထကျကို ပိုနစေပေါတယျ။
၅။ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ နောကျဆုံးမီးတောကျပှငျ့လနျးခြိနျ
ပျေါတူဂီရဲ့တိုကျစဈပိုငျးမှာ လကျရှိစီးရီးအရှေဖေိနပျဆုရှငျ ရျောနယျလျဒို၊ ဘှနျဒကျလီဂါမှာ ဖရနျ့ဖတျမှာ အဟပျမိသှားပွီး ၂၉ ဂိုးသှငျး၊ ၁၀ ဂိုးဖနျတီးထားတဲ့ အနျဒရီ ဆေးလျဗားတို့က အသကျသှေးကွောဖွဈလာမှာ သခြောပေါကျဆိုတဲ့အပွငျ လီ​ဗာပူးလျတိုကျစဈမှူး ဂြိုတာက ပူးပေါငျးလာဦးမှာဖွဈတယျ။ ဒါ့အပွငျ အတေီကိုနဲ့ လာလီဂါခနျြပီယံဖွဈထားတဲ့ ဂြာအို ဖဲလစ်စက နညျးပွဆနျးတို့ဈရဲ့ အသငျးကို ကြားကို အ​တောငျပံတပျဆငျပေးလိုကျသလို ဖွဈလာမယျ့အပွငျ ယူရို ၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲဟာ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ နောကျဆုံးမီးတောကျပှငျ့လနျးခြိနျနဲ့ ညှဈအားနဲ့ အစှမျးကုနျရုနျးကနျမှုတှေ ပေါငျးစပျလာတော့မှာဖွဈလို့ ပျေါတူဂီအသငျးကသာ ခနျြပီယံဖွဈဖို့ အလားအလာကောငျးနတေယျလို့ သတျမှတျခံထားရတာဖွဈကောငျး ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ZAWGYI: လာမယ့် ယူရို ၂၀၂၀ အစားထိုး ၂၀၂၁ ပြိုင်ပွဲမှာ ပေါ်တူဂီအသင်းအနေနဲ့ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဟန်ဂေရီတို့ရဲ့ မရဏအုပ်စုထဲကို ကျရောက်နေတာက ခရီးကြမ်းဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေတယ်။ ရှုံးထွက်အဆင့် ၁၆ သင်းအဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ အုပ်စုကနေ ၂ သင်းသာ ကျွတ်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီဆိုတဲ့ ယူရိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့ လက်ရှိဥရောပရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရွေးစင်အသင်း ၃ သင်းထဲက အနည်းဆုံး တစ်သင်းကတော့ အုပ်စု ​F ကနေ အိမ်ပြန်ရမှာကတော့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်လာနေတာပါ။
ဒီအချိန်မှာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုဦးဆောင်လာတဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းကိုကြည့်ရင် ဘယ်အသင်းမှ လိုက်မမီတဲ့ အတောင့်တင်းဆုံးလူစာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကို တွေ့ရချိန်တာက လက်ရှိချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ဘာကြောင့် ယူရိုပါလိဂ်ဘုရင်အဖြစ် ထပ်မံပွဲခံဦးမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးမှုတွေမြင့်တက်လာစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ကြည့်တဲ့အခါ….
၁။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးအသင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ခရိုအေးရှား၊ ဝေးလ်စ်နဲ့ ပြင်သစ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှု သီးပွင်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်ဖို့ ရောက်ရှိလာတာဖြစ်သလို ၂၀၁၈-၁၉ ရဲ့ UEFA နေရှင်းလိဂ်မှာလည်း ပထမဆုံးချန်ပီယံအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာ့ဖလားကျဆုံးမှုကို ပြန်ဦးမော့ဖို့ မောင်းတင်လာမှာပါ။
၂။ ပြိုင်ဘက်တိုင်း ဖြုံရလောက်တဲ့ သာလွန်အင်အား
သိပ်ကို ပြီးပြည်စုံပြီး ဟန်ချက်ညီတဲ့ လူစာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာက ရော်နယ်လ်ဒိုပရိသတ်တွေရော ပေါ်တူဂီပရိသတ်တွေအတွက်ပါ သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် မက်ဆီကို အလဲထိုးနိုင်မယ့် ချက်ကောင်းအဖြစ် ခံယူထားကြတာကို တွေ့ရသလို ညီညွတ်လွန်းတဲ့ လူစာရင်းက ယူရိုချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ လုံလောက်တာထက်ကို ပိုနေတဲ့နောက်မှာ ကွင်းထဲက ခြေစွမ်းကသာ သက်သေဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်တော့တယ်။
၃။ လူငယ်နဲ့ သမ္ဘာ အချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ခံစစ်ပိုင်း
ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ မန်စီးတီးရဲ့ ရူဘင် ဒီယက်စ်နဲ့ သမ္ဘာ့ရင့် ဖွန်တေ၊ ပီပီတို့ရဲ့ ပေါင်းစပ်မှုက ဗဟိုခံစစ်ပိုင်းကို စွဲမက်စရာဖြစ်စေသလို ဘယ်သူမှ ဂိုးမဝင်နိုင်တော့မယ့် ဂိုးပေါက်ကို ကာကွယ်ဖို့လားလို့ အမွှမ်းတင်ခံထားရချိန်မှာ ညာနောက်ခံလူမှာ ကန်ဆယ်လို၊ ဘယ်နောက်ခံလူနေရာမှာ ဂွာရဲရိုးနဲ့ နူနို မန်ဒက်စ်တို့ရဲ့အားက ကြောက်စရာသိပ်ကောင်းတဲ့ အတွဲအဖက်ဖြစ်နေတယ်။
၄။ ဆရာကျလွန်းတဲ့ ကွင်းလယ်
ရှေ့၊ လယ်၊ နောက် ဟန်ချက်ညီလွန်းနေတယ်လို့ ချီးကျူးမှုနောက်မှာ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ပိုင်းက ဘရူနိူ ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗားတို့က အမြင့်ဆုံးဖန်တီးမှုအပိုင်းကို တာဝန်ယူသွားဖို့ ရှိနေပြီး ကွင်းလယ်အထိုင်မှာ ပါရဲရား၊ မော်တင်ဟိုတို့အပြင် စပို့တင်းလစ္စဘွန်းရဲ့ ကွင်းလယ်ခံစစ်သမား ပယ်လင်ညာလည်း ရှိနေသလို ရီနာတို ဆန်းချက်ဇ်၊ ဝီလီယံ ကာဗယ်လ်ဟို၊ ရူဘင် နီဗက်စ်တို့ကို ပေါ်တိုရဲ့ လက်ရှိအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်လူဆာဂျီယို အိုလီဗီယေးရာက ထပ်ပေါင်းစပ်လာဦးမှာက ကွင်းလယ်အားကို တောင့်တာထက်ကို ပိုနေစေပါတယ်။
၅။ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နောက်ဆုံးမီးတောက်ပွင့်လန်းချိန်
ပေါ်တူဂီရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ လက်ရှိစီးရီးအေရွှေဖိနပ်ဆုရှင် ရော်နယ်လ်ဒို၊ ဘွန်ဒက်လီဂါမှာ ဖရန့်ဖတ်မှာ အဟပ်မိသွားပြီး ၂၉ ဂိုးသွင်း၊ ၁၀ ဂိုးဖန်တီးထားတဲ့ အန်ဒရီ ဆေးလ်ဗားတို့က အသက်သွေးကြောဖြစ်လာမှာ သေချာပေါက်ဆိုတဲ့အပြင် လီ​ဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူး ဂျိုတာက ပူးပေါင်းလာဦးမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် အေတီကိုနဲ့ လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ ဂျာအို ဖဲလစ္စက နည်းပြဆန်းတို့စ်ရဲ့ အသင်းကို ကျားကို အ​တောင်ပံတပ်ဆင်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်လာမယ့်အပြင် ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲဟာ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နောက်ဆုံးမီးတောက်ပွင့်လန်းချိန်နဲ့ ညှစ်အားနဲ့ အစွမ်းကုန်ရုန်းကန်မှုတွေ ပေါင်းစပ်လာတော့မှာဖြစ်လို့ ပေါ်တူဂီအသင်းကသာ ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ အလားအလာကောင်းနေတယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ကောင်း ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။